Atụmatụ na ụmụaka na Madrid | Akụkọ Njem
Maria | | Oge ntụrụndụ, Iso umuaka eme njem
Ndị ga-eso ezinụlọ ahụ nọrọ ụbọchị ole na ole na Madrid ga-achọ ime atụmatụ na ụmụaka, ebe ọ na-enye ha ohere ịmara akụkụ dị iche nke obodo ahụ ma n'otu oge ahụ hapụ nwatakịrị ahụ anyị niile na-ebu pụọ ka ị nwee obi ụtọ nwa oge.
Madrid bụ nnukwu obodo dịgasị iche iche nke na enwere atụmatụ zuru oke ime. Lee atụmatụ 6 na ụmụaka nọ na Madrid nke enwere ike ịme dị ka ezinụlọ n'oge afọ. Nwee obi ụtọ na ha!
2 Gba ọsọ n'elu ugwu
3 Skeeti akpụrụ mmiri
4 Ogige ntụrụndụ
6 N'etiti anụmanụ
Akụkọ banyere Tooth Fairy kwuru na mkpanaka enyi a nwere ọrụ nke ịnakọta ezé mmiri ara ehi ụmụaka niile mgbe ha dara ma na nloghachi ọ hapụrụ mkpụrụ ego n'okpuru ohiri isi.
Ratoncito Pérez sitere na echiche nke okpukpe Luis Coloma bụ onye mepụtara akụkọ na òké dị ka onye na-akwado ya iji mee ka iru uju nke Eze Alfonso XIII dị ka nwatakịrị mgbe ọ nwụsịrị otu n'ime mmiri ara ehi ya.
Dabere na akụkọ ahụ, oke ahụ biri na ụlọ na Arenal Street na Madrid, n'akụkụ Puerta del Sol ma dị ezigbo nso na Palacio de Oriente. Ka ọ dị ugbu a, na ala mbụ nke nọmba 8 nke n'okporo ámá ahụ, -lọ-Museum nke Ratoncito Pérez dị, nke a ga-eleta kwa ụbọchị ma e wezụga Sunday. Ọnụ ụzọ ụlọ-Museum bụ 3 euro.
Gba ọsọ n'elu ugwu
Oge oyi bụ ezigbo ohere ịme egwuregwu egwuregwu oge oyi, ịbụ otu n'ime atụmatụ na ụmụaka nọ na Madrid na ha ga-enwe mmasị karịa ebe ọ bụ na ọ na-agwakọta ọchị na ụbọchị n'èzí, nke na-atọ ha ụtọ mgbe niile.
Obodo nke Madrid nwere otu ebe ezumike izizi mbụ mepere na mba ahụ na 40s. Ọ bụ ama Puerto de Navacerrada dị na Cercedilla, n'ime Sierra de Guadarrama na adịghị anya site na etiti obodo yana ọdụ Valdesquí, dịkwa n'otu ugwu ahụ.
Skeeti akpụrụ mmiri
Banye na ice na-egwu iji chọpụta onye kachasị ọsọ bụ otu n'ime atụmatụ kachasị amasị ụmụaka, ọkachasị ugbu a ọnọdụ okpomọkụ malitere ịda. N'oge ekeresimesi obodo ahụ juputara na obere ice iji nwee ezumike oge ezumike mana rue oge ahụ, ezinụlọ nwere ike ịga Palacio de Hielo Dreams (Calle de Silvano, 77), otu n'ime ewu ewu na Madrid.
Akuku ice a dị na nnukwu ụlọ ahịa ma meghee kwa afọ maka ịsọ asọmpi, hockey ma ọ bụ were ụfọdụ nkuzi skating. O nwere akụkụ nke 1800 m2 na ọnụ ụzọ nwere ọnụahịa nke euro 7 ruo 12,50 dabere na oge ma ọ bụ na anyị chọrọ ịgbazite skates. Iji nweta ice rink ọ dị mkpa iyi uwe.
Otu n'ime atụmatụ kachasị ọchị na ụmụaka nọ na Madrid bụ ịga leta ndị ochie dịka Parque Warner ma ọ bụ Parque de Amusement, nke na-enye ụdị ọrụ niile iji nwee ọ funụ. N'ime afọ, ha na-ejidekarị ihe omume ndị metụtara Halloween ma ọ bụ Christmas n'ihi ya, ileta ha n'oge dị ka nke a bụ ohere pụrụ iche ịmara ogige ntụrụndụ ndị a n'ụzọ dị iche.
Enwere ike ịzụta nnabata na Parque Warner n'ụlọ ọrụ igbe site na euro 39,90 na ọnụahịa ya nwere ike ịdị iche dabere na ụbọchị na ikike iji kwado ọrụ kacha mma. N’ogige ntụrụndụ ahụ, a na-akwụ tiketi na office office na € 32,90 maka ndị okenye yana .25,90 19,40 maka ụmụaka, ebe ndị lara ezumike nka na-akwụ € XNUMX.
Andy Williams na-abụ abụ na Christmas bụ oge kachasị mma n'afọ na ọ bụ eziokwu. Na Madrid, n'okporo ámá jupụtara na osisi fir na-enwu gbaa na ọkụ na-enye ya agba pụrụ iche na ikuku. Lovemụaka nwere mmasị ịga n'okporo ámá na-eleta ahịa Krismas ma banye Naviluz, ụgbọ ala Krismas na-agagharị na obodo iji tụgharịa uche ihe ịchọ mma oge oyi niile.
Mana otu atụmatụ na ụmụaka nọ na Madrid nke bụ kpochapụwo na ekeresimesi bụ Atọ nke Ndị Eze Atọ n'ehihie nke Jenụwarị 5. N'elu mmiri dị egwu nke jupụtara na agba na ìhè, ndị amamihe atọ ahụ na-ekesa ihe ụtọ na echiche efu nye ọha na eze si na mmalite ya na ọdụ Nuevos Ministerios ruo Plaza de Cibeles ebe ọ kwụsịrị.
Childrenmụaka niile hụrụ anụmanụ n'anya na ịga ileta Faunia ma ọ bụ Madrid Zoo na ha bụ ezigbo echiche. Faunia bụ ogige ntụrụndụ ewepụtara maka okike nke ekewapụtara gburugburu ebe obibi dị iche iche na iri na ise n'adịghị ka ogige ụmụ anụmanụ. Ma, o nweghị anụmanụ dị ka nke a. N'ọnọdụ ọ bụla, ebe abụọ ahụ na-eme mkparịta ụka na ngosipụta na ụmụ anụmanụ site n'echiche mmụta ndị na-enyere ndị na-eto eto na ndị agadi aka ịghọta àgwà ha na ebe obibi ha.
Ọnụ ụzọ Faunia nwere ọnụahịa nke 26,45 euro maka ndị okenye na ụmụaka n'okpuru afọ 7 na ndị lara ezumike nka na-akwụ euro 19,95. N’ogige zoo, tiketi dị n’ọfịs na-efu euro 23,30 maka ndị okenye ebe ndị ezumike nka na ụmụaka na-akwụ euro 18,90. Ọ bụrụ na azụrụ ha na ntanetị, ọnụahịa dị ọnụ ala.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Oge ntụrụndụ » Atụmatụ na ụmụaka na Madrid